Teboka famantarana #5 | Grandir à Antsirabe
Teboka famantarana #5
IREO ANKIZIN’NY LALANA (LES ENFANTS DE A RUE)
Araka ny traikefan’ny Samu Social International, izay niasa nanomboka tamin’ny taona 1998
Ary koa araka ny fampiofanana teo anivon’ny fikambanana Grandir à Antsirabe, natao tamin’ny taona 2016 niarahana tamin’i Manon, izay mpianatra tao amin’ny DU « Tanora sy ankizin’ny lalana » avy amin’ny SSI ary i Noro, mpandrindra ny Programme de Protection des Enfants des Rues (PPER), Grandir à Antsirabe.
→ Cliquez ici pour la traduction malagasy
#5. DINGAN’NY FIVAONANA AMIN’NY RAFITRA SOSIALY
Fanarahana ny rafitra sosialy : io fanarahana ny rafitra sosialy io dia « dingana izay lalovan’ny zaza iray handraisany ny zava-misy eo amin’ny fiainana manodidina azy ( sata, ny kolon-tsaina, ny fomba amam-panao sy ny fitondran-tena) ka mahatonga azy ho tafiditra ao anatin’ny fiainana ara-tsosialy » eo anivon’ny fianakaviany na ny fireneny.
Fivaonana amin’ny rafitra sosialy : eny amin’ny lalana dia zavatra mifanohitra no mitranga, ireo tondrolalana sy ireo fomba amam-panao fototra dia very tsikelikely, rafitra hafa no manolo izany.
Ireo fiovana ireo dia mifandray amin’ny fomba entina mivelona napetrak’ireo ankizy tonga eny amin’ny lalana (Teboka famantarana faha 3). Ireo izay miaina eny amin’ny lalana dia tsy maintsy miatrika izany avokoa. Na izany aza dia samy hafa io dingana io eo amin’ny tsirairay, na voamarika kokoa, na haingana kokoa.
Ny hafainganan’io dingan’ny fivaonana amin’ny rafitra sosialyio dia miankina amin’ny :
Mombamomba ilay olona amin’izy vao tonga eny amin’ny lalana, izany hoe hatraiza ny fiantraikan’nyzavatra niainany teo aloha.
Ny fotoana niainana teny amin’ny lalana : arakaraky ny halavan’ny fotoana hijanonana eny amin’ny lalana no manamafy io dingana io ary miha-tsy azoialana.
Ny toetran’ny tsirairay
Hetsika ara-panatanjahan-tena, baolina kitra io : Alefa CHT!
Tretrika anie izao miaraka amin’ny “maillot” miloko volom-parasy ny andaniny, maitso kosa ny ankilany. Mahavariana sy mahatsikaiky ny mahita azy ireo miara-mirona manenjika ny baolina any amin’izay hitarihan’ny iray azy.
Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA
Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!
Portrait: Ursula « la petite fée des soins » ao amin’ny CHT sy mandritra ny « maraude »
Antsoina amin’ilay anaran’angoty hoe « la petite fée des soins », i Ursula, tonga tao amin’ny Grandir à Antsirabe izy ny volana janoary teo. Izy no ilay mpitsabo sy mpanara-maso ny fahasalam’ny ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy mandritra ny maraude. Sady mpanasitrana ny ferin’ny ankizy : ara-batana aloha,fa koa(ary indrindra)ny fanahy (saina).
Lire aussi : Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !
MG	Tatitra traik’efa : Margot, efa-bolana niofanana…
MG	Noelin’ny Ankizin’ny lalana ao amin’ny CHT